Maitiro ekudzima uye kudzima makuki muSafari | Ndinobva mac
Cookies, iwo makuki anofara ayo, anotevera kuyedza kweEuropean Union, kuzivisa vashandisi nguva dzese nezve zvinoitwa nemapeji ewebhu, zvinotimanikidza kuti tigamuchire mazwi nguva dzese patinoshanyira webhusaiti. Cookies idiki faira rine basa rekuchengetedza ruzivo nezve mashandisiro atinoita ewebhu peji, senge mutauro kana kuratidza zvaunofarira.
Asi pamusoro pezvo, iri zvakare basa rekutarisa kufamba kwedu pane mamwe mapeji ewebhu, kuitira kuti masevhisi ekushambadzira agone kubvunza kwavari uye nekudaro vakwanise kuvaratidza kushambadzira kwakanangana nezvisanyanya kufadza panguva iyoyo. Iine macOS High Sierra, Apple yakavimbisa kudzikisira kuteedzera mamwe makuki anoitwa kuburikidza neSafari, asi zvingave zvisina kukwana kune vamwe vashandisi.
Asi makuki haagare ari "shamwari dzakaipa", asi pazviitiko zvakawanda vanogona kubatsira zvakanyanya, asi mashandisirwo avo uye kukosha kwavo kwakave nedhimoni nekuda kwekushandisa zvisirizvo kunoitwa nemamwe makambani neruzivo rwavanogona kuwana nezvedu. Kana iwe uchida kuona kuti hupenyu hungadai hwakaita sei pasina makuki kana iwe uchida kudzima makuki ese akachengetwa muSafari, saka tinokuratidza maitiro atingaite bvisa Safari makuki.
1 Rudzii rweruzivo runochengetwa neSafari nezve kubhurawuza kwedu?
2 Bvisa makuki ese muSafari
3 Delete chaiwo makuki muSafari
4 Maitiro ekuvharira makuki muSafari
Rudzii rweruzivo runochengetwa neSafari nezve kubhurawuza kwedu?
Safari, semabhurawuza ese atinoshandisa nguva dzose, tinogona kuchengeta data rakasiyana pakombuta yedu sezvakaita makuki, kuwedzera kune yakajairwa cache. Asi pamusoro pezvo, ivo vanogona zvakare kuwana mukana kuchikwata chedu, mukana wekuti isu takambobvumidza patiri kuisa chifananidzo kune webhusaiti. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi mhando yekuwana mamwe mapeji ewebhu kune timu yedu uye kuti ndeipi mhando yedata yakachengetwa, isu tinofanirwa kuwana Sarudzo dzeSystem> Zvakavanzika
Tevere, tinoenda kune Manage webhusaiti data bhatani. Muhwindo rinowoneka pazasi, tinoenda kubhokisi rekutsvaga riri mukona yekumusoro kurudyi uye tinopinda mazwi ekutsvaga. Mubhokisi remhedzisiro, peji rewebhu rinoratidzwa ne mvumo yese yaunayo yekuchengetedza zvemukati uye nekuwana timu yedu.
Bvisa makuki ese muSafari
Kuti uwane makuki anochengetwa neSafari, tinofanirwa kutanga tawana iyo Safari Zvaunoda, uye enda kune iyo tab Privacy.
Sarudzo yekutanga iyo inotiratidza iyo Safari Yakavanzika marongero ndeayo ini andakuudza iwe nezve iro basa iro iroinoteedzera iyo yekutevera yemapeji ewebhu nezve kufambisa kwedu, basa rakabva paruoko rweMacOS High Sierra.
Kuti uwane makuki ese akachengetwa neSafari pakufambisa uye nemapeji ewebhu atinoshanyira, tinofanirwa kubaya Manage webhusaiti data.
Mushure memasekondi mashoma, mapeji ese ewebhu anochengeta pakombuta yedu chero mhando yeruzivo kubva kune kwedu chiitiko, makuki, kana kubva kune yako webhusaiti senge cache.
Kuti tibvise makuki ese akachengetwa pakombuta yedu, senge cache yakachengetwa, isu tinofanirwa kuenda kubhatani Delete ese.
Tevere, meseji yekusimbisa inozoratidzwa, meseji yatinofanirwa kusimbisa kuburikidza nebhatani Delete izvozvi.
Delete chaiwo makuki muSafari
Asi kana isu tichingoda kudzima makuki eimwe peji rewebhu, tinogona kuzviita, tichishandisa bhokisi rekutsvaga riri muchikamu chepamusoro kurudyi chechidzitiro, kusarudza iyo chaiyo peji rewebhu nekudzvanya Delete. Maitiro aya zvinongodzima izvo zvine hukama newebhusaiti yatakasarudza pasina kukanganisa mamwe mapeji ewebhu atakashanyira.
Kana tangobvisa makuki ese atakachengeta pamidziyo yedu, pese patinoshanyira peji rewebhu, meseji inozoratidzwa isu tinoziviswa nezvekushandisa kwaunoita nemakuki auchazochengetera pakombuta yedu, meseji inofara inozoratidzwa pane yega yega peji rewebhu ratino shanyira zvakare.
Maitiro aya, hazvikanganisa mapassword atakachengeta mumidziyo yedu, sezvo izvi zvakachengetwa kuburikidza neICloud keychain, saka tinogona kudzima ruzivo rwese urwu pasina kukanganisa makiyi atakachengetera pakombuta yedu uye kuwiriraniswa nemakomputa ese ane hukama neiyo imwechete Apple ID.
Maitiro ekuvharira makuki muSafari
Kana isu tichida kudzivirira chero peji rewebhu kuti tikwanise kuchengeta makuki pakombuta yedu, isu tinofanirwa kuwana iyo Safari uye Zvekuvanzika Zvaunoda. Mukati ma Cookies uye webhusaiti dhata dhata, isu tinowana sarudzo Bvisa makuki ese. Iyi sarudzo inogona kudzikamisa kushanya kune mamwe mapeji ewebhu kuti vatiratidze ruzivo rwavo ivo vanofanirwa kushandisa makuki, saka hazvikurudzirwe kuimaka.
Paunotarisa bhokisi iri, Safari ichaita otomatiki ichabvisa yega yega yega yega makuki akachengetedzwa pakombuta yedu, sezvo zvikasadaro hazvinganzwisisike kuramba uchizvichengetera pakombuta yedu, saka unofanirwa kuve wakajeka nezve maitiro aya usati waita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima uye kudzima makuki muSafari